တစ်စွန်ဂိုကန် - ဝီကီပီးဒီးယား
Cameroon၏ မြေပုံကို ပြသရန်
3°34′8″N 9°52′44″E﻿ / ﻿3.56889°N 9.87889°E﻿ / 3.56889; 9.87889ကိုဩဒိနိတ်: 3°34′8″N 9°52′44″E﻿ / ﻿3.56889°N 9.87889°E﻿ / 3.56889; 9.87889
တစ်စွန်ဂိုကန် သည် ကင်မရွန်းနိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းတွင် တည်ရှိသည့် ကန်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င်းကန်သည် လစ်တိုရယ်စီရင်စုရှိ Douala Edéa တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နယ်မြေအတွင်းတွင် တည်ရှိသသည်။ ၎င်းကန်သည် ဆာနာဂါမြစ်၏ တောင်ဘက်ကမ်းနှင့် ၅ ကီလိုမီတာ (၃.၁ မိုင်) အရှည်ရှိ ရေလမ်းကြောင်းမှ ဆက်သွယ်တည်ရှိသည်။ ကန်မှ ရေများသည် မြစ်အတွင်းသို့ ၄၀ ကီလိုမီတာရှည်သည့် Edéa ချောင်းမှတစ်ဆင့် စီးဝင်သည်။ ဤဒေသသည် ဇီဝဆိုင်ရာ ပေါကြွယ်ဝသည်။ ထိုကန်ရှိရာဒေသမှ ရွာငါးရွာမှ ရွာသားများသည် တောကောင်များလိုက်ကာ အသက်မွေးမှု ပြုကြသည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ် လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ထိုကန်ရှိရာ ဒေသ၌ လက်နက် ၅၀ ခန့် တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
↑ IUCN Conservation Monitoring Centre; IUCN Commission on National Parks and Protected Areas; International Union for Conservation of Nature and Natural Resources; United Nations Environment Programme, Global Environmental Monitoring System (1 August 1987)။ IUCN directory of Afrotropical protected areas။ IUCN။ p. 91။ 29 August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ West၊ Ben (18 October 2011)။ Cameroon, 3rd။ Bradt Travel Guides။ p. 117။ ISBN 978-1-84162-353-5။ 29 August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ IUCN/SSC Primate Specialist Group; World Wildlife Fund (U.S.); State University of New York at Stony Brook. Dept. of Anatomical Sciences; Conservation International, BioOne (Organization) (1990)။ Primate conservation: the newsletter and journal of the IUCN/SSC Primate Specialist Group။ World Wildlife Fund and the Dept. of Anatomical Sciences, State University of New York at Stony Brook။ p. 10။ 29 August 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တစ်စွန်ဂိုကန်&oldid=666825" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၁၁:၃၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။